​​​​​​​Maamulka G Banaadir oo isku khilaafsan Dibadbaxa Khamiista | KEYDMEDIA ONLINE
​​​​​​​Maamulka G Banaadir oo isku khilaafsan Dibadbaxa Khamiista
Waxaa waqtigan xubnaha ugu sareeya maamulka gobolka Banaadir, ka dhex aloosan khilaaf ka dhashay dibadbaxa lagu wado inuu Caasimadda ka dhaco Khamiista todobaadkaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Khilaafka ka dhashay dibadbaxa Khamiista dhacaya, ee looga soo horjeedo Farmaajo ayaa yimid, kadib markii xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay diideen, in la hor istaago banaanbaxaas.
Amarka in la joojiyo dibadbaxa ayaa waxaa soo jeediyey, Cali Yare Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku xigeenka dhanka Amniga, waxaase dalabkiisa ka hor yimid Duqa Casimadda Cumar Finish iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka gobolka.
Fikirka ah in la joojiyo dibadbaxa, oo awood ciidan la adeegsado, ayaa ka yimid kooxda waqtigeedu dhamaaday ee fadhisa Villa Soomaaliya, kuwaa oo qorshahooda usoo dhiibay Cali Yare Cali, oo xilligan u muuqda nin u hamuun qaba in dhiig uu ku daato gudaha Muqdisho.
Duqa gobolka iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada Caasimadda ayaa ka hor yimid, waana kuwa dareensan dhibaatada ka dhalan karta joojinta dibadbaxaas, oo ay dadka Muqdisho ku cabirayaan, dareenkooda ku wajahan xaaladda siyaasadda dalka.
Shalay ayey ahayd markii Cali Yare, uu ka dhawaajiyey in aan la qaban karin dibadbax aan la ogaysiin dowladda hoose ee Xamar, waxaase u jawaabay, wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi, oo ka mid ah dadka abaabulaya dibadbaxa, wuxuuna tilmaamay in ay dhigayaan banaanbaxa, isla markaana ay fasax ka heystaan wasaaradda amniga dalka.
Cali Yare Cali, ayaa ka mid ah dadka uu Farmaajo u adeegsado, in ay baraha bulshada ku aflagaadeeyaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan siyaasadiisa macangag-nimada ku dhisan, waana shakhsi kaalin ka qaata hurinta colaaddaha, isagoo ku qanacsan fikirka keli talisnimada ee uu Farmaajo doonayo inuu dalka ku qabsado.